Real Madrid oo qorsheeneysa inay marto wado ay horey u qaaday si ay ula soo saxiixato Jadon Sancho – Gool FM
(Madrid) 17 Mar 2020. Sida ay shaaca ka qaadeen wargeysyada ka soo baxa gudaha dalka Faransiiska maanta oo Talaado ah, kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa dooneysa inay dib u soo celiso dhacdo ay horey u sameysay, si ay ula soo saxiixato weeraryahanka da’ada yar reer England iyo naadiga Borussia Dortmund ee Jadon Sancho.
19 jirkan reer England ayaa ka sameeyay bandhig fiican kooxdiisa Borussia Dortmund labadii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay, taasoo ka dhigtay inuu bar-tilmaameed buuxa u noqdo kooxaha ugu waa weyn Yurub.
Haddaba wargeyska “le10sport” ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in Real Madrid ay sugi doonto ilaa iyo dhamaadka xilli ciyaareedka soo socda si ay ula soo saxiixato Jadon Sancho, waana isla qaabkii ay kagala soo saxiixatay Eden Hazard kooxda Chelsea.
Real Madrid ayaa aamminsan in qiimaha ay u dajisay Borussia Dortmund inay ku iibiso Jadon Sancho ee gaarsiisan 140 milyan oo euro uu yahay mid aad u sareeya, isla markaana aysan ogolaan doonin koox kasta inay u dhaqaaqdo go’aaminta heshiiskiisa xagaaga soo socda.
Warbixintan ayaa lagu xusay in saraakiisha Real ay sugi doonaan ilaa dhamaadka xagaaga 2021, kaasoo ah kahor dhamaadka qandaraaska Sancho hal xilli ciyaareed kahor kaliya marka uu ka harsan yahay, si ay ugala wareegaan heshiis dhaqaale oo xaddidan, maadaama ay Borussia Dortmund ku qasbanaan doonto inay iska iibiso waqtigaas si uusan beeca xurta ah kaga dhaqaaqin xilli ciyaareedka xiga.